Tottenham oo lacag rikoorka adduunka ah hor dhigtay kooxda Real Madrid haddii ay doonayaan inay la wareegaan Eriksen – Gool FM
Tottenham oo lacag rikoorka adduunka ah hor dhigtay kooxda Real Madrid haddii ay doonayaan inay la wareegaan Eriksen
(London) 17 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Tottenhan ayaa la soo warinayaa inay lacag rikoorka Adduunka ah hor dhigtay naadiga Real Madrid haddii ay doonayso inay la wareegto Eriksen.
Spurs ayaa kooxda Real Madrid weydiisatay lacag dhan 200 milyan oo gini haddii ay doonayaan inay la saxiixdaan laacibkooda khadka dhexe ee Christian Eriksen.
Sida warbixinta lagu sheegay kooxda Tottenham ayaa lacag rikoorka adduunka ah oo dhan 200 milyan oo gini oo u dhiganta 266 milyan oo dollar weydiisatay kooxda Real Madrid haddii ay doonayso inay la saxiixdaan Christian Eriksen.
Real Madrid ayaa xiisaynaysa saxiixa xiddiga Spurs ee Eriksen, laakiin Jariiradda Daily Star ayaa sheegaysa in kooxda ka dhisan Premier League ay naadiga reer Spain weydiisatay lacag ay adag tahay in la bixiyo haddii ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan laacibkan ka mid ah kuwa furaha u ah Tottenham.
David Beckham oo doonaya inuu hal koox isugu keeno Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi!